Lobelia (လိုဘီလီယာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Lobelia (လိုဘီလီယာ)
Lobelia (လိုဘီလီယာ) ကဘာလဲ။
လိုဘီလီယာ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Lobelia ကို အောက်ပါကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကြပ်၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး၊ မွေးကင်းစကလေးများတွင် အသက်ရှုရပ်သွားခြင်း ကဲ့သို့သော အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပြဿနာများ။
ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း၊ လေးဘက်နာရောဂါကြောင့် အဆစ်တို့ တွင် အကျိတ်အဖုများ ဖြစ်နေခြင်း၊ အတွင်းကြေခြင်း၊ အဆစ်လွဲခြင်း၊ အကောင်ကိုက်ခြင်း၊ အပင်ဆိပ်မိခြင်း နှင့် ပွေးပေါက်ခြင်း။
Lobelia ကို အခြားအခြေအနေများအတွက်လည်း အသုံးပြုပါသေးတယ်။ ထပ်မံသိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့ကို မေးမြန်းပါ။
Lobelia မှာ အကျိအချွဲတွေကို နည်းပါးစေခြင်းအားဖြင့် ချောင်းဆိုးရ၊ အသက်ရှုရ လွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပန်းနာရင်ကြပ်သမားတွေမှာပေါ့။ Lobelia မှာ ပါတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတစ်မျိုးက နီကိုတင်းလို အစွမ်းရှိပါတယ်။
Lobelia ဘယ်လို အလုပ်လုပ် တယ်ဆိုတာ အတိအကျဖော်ပြနိုင်တဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေ မရှိသေးပါဘူး။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့နှင့် ဆွေးနွေးပေးပါ။
လိုဘီလီယာ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါ အကြောင်းအရာများ ဖြစ်နေပါက ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Legalon ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများနဲ့ အခြားဆေးဝါးတို့ဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
အောက်ပါများကဲ့သို့သော နာမကျန်းခြင်း၊ မူမမှန်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ ရှိနေခြင်း။
အနာပေါက်ခြင်း၊ Crohn’s disease၊ ပိုးဝင်ခြင်းများနှင့် အခြားအရာများ ကဲ့သို့သော အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ပြဿနာများ
နှလုံးရောဂါ။ Lobelia က နှလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပမာဏများလေ သက်ရောက်မှု ပြင်းလေပါပဲ။
အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး၊ ကြာရှည်ခံဆေး နဲ့ တိရိစ္ဆာန်တို့ဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြား Allergy များရှိနေခြင်း။
Lobelia သောက်သုံးခြင်းက အခြားတွေဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်းလောက် တိကျဖို့မလိုပါဘူး။ ဘယ်လောက်ဘေးကင်းတယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေ လုပ်ရပါအုန်းမယ်။ ယင်းဆေးကို သုံးရင် ရမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက သူ့ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေထက် ပိုများပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူတို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
လိုဘီလီယာ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကလေးများအတွက်။ ကလေးတွေကို Lobelia ပေးရင် စိတ်ချလား မချရဘူးလားဆိုတာကတော့ မသိရသေးပါဘူး။ ကလေးကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူတို့ရဲ့ ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်သာ ယင်းဆေးကို အသုံးပြုပါ။
Lobelia ကို သောက်ဆေးအဖြစ် သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူ့အတွက်မှ စိတ်မချရပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ အဓိကဖြစ်စေတာကတော့ အော့အန်ခြင်းပါပဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း၊ နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာ Lobelia ကို မသုံးပါနှင့်။
လိုဘီလီယာ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းကို မသက်မသာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွင်းနာ၊ Chron’s disease၊ အူရောင်ရမ်းနာများ (IBD)နှင့် အူလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း ရှိနေသော လူများရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ပိုမို ဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းတော့ ယင်းဆိုးကျိုးတွေကို မခံစားရနိုင်ပါဘူး။ အထက်တွင် မဖော်ပြထားသော ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးပါ။
လိုဘီလီယာ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Lobelia လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများဖြင့် အချင်းချင်း သက်ရောက်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများ။ စိတ်ကျရောဂါ ပျောက်ဆေးများ၊ လစ်သီယမ်၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးနှင့် ဆေးကြွဆေးများ ( ADADH တို့အတွက် ဆေးဝါးများ)
နီကိုတင်း အစားထိုးများ။ နီကိုတင်း ပလာစတာ၊ နီကိုတင်း ပီကယ်။
Chantix ( varencline) ။ Chantix ဟာ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဆေးတစ်မျိုးပါ။ ယင်းဆေးက ဦးနှောက် ထဲမှာရှိတဲ့ ဒိုပါမင်း အနည်းအများအပေါ် သက်ရောက်ပါတယ်။
ဆေးရွက်ကြီး။ စီးကရက်နဲ့ မီးခိုးမထွက်သော ဆေးရွက်ကြီးများ
လိုဘီလီယာ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အတွက်။ Lobelia တစ်နေ့ကို 5mg နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ် lozenges 0.5mg
အပွင့်တို့ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အသုံးပြုပုံ။ အအေးမိ ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက်2g ကနေ 4g အတွင်း လက်ဖက်ရည် အဖြစ် နေ့စဉ်သောက်ပေးပါ။
သောက်ရမည့်Lobelia ပမာဏသည် လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မတူပါ။ ဆေးပမာဏသည် အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ နှင့် အခြားသော အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်ပါတယ်။ Lobelia သည် အမြဲတမ်းတော့ စိတ်မချရပါဘူး။ သင့်တော်တဲ့ ဆေးပမာဏကို သောက်သုံးနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်၊ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ပေးပါ။
လိုဘီလီယာ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Lobelia ကို အောက်ပါပုံစံများဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးအရည၊် တင်ချာ နှင့် Lobelia အခြောက်များ ပါသော ဆေးတောင့်များနှင့် လက်ဖက်ရည်များ
လိမ်းဆေး၊ လိုးရှင်းနှင့် ပလာစတာ
Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ဆေးစစ်ချက်များနှင့် ကုသမှုများ မပြုလုပ်ပေးပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 8, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 12, 2017
Lobelia. https://www.drugs.com/npc/lobelia.html. Accessed 06 December, 2016.
Lobelia. http://umm.edu/Health/Medical/AltMed/Herb/Lobelia. Accessed 06 December, 2016.
Lobelia. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 231-lobelia.aspx?activeingredientid=231.
Accessed 06 December, 2016.
ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း အမျိုးအစား ၄ မျိုး ။ ။
ကိုယ့်ကလေးက ကားမူးတတ်လို့ ခရီးသွားရမှာ စိတ်ညစ်နေပြီလား။